Fandaharanasa « Miatrika Covid”: hampiofanina ny mpisehatra amin’ny fizahantany | NewsMada
Fandaharanasa « Miatrika Covid”: hampiofanina ny mpisehatra amin’ny fizahantany
Manana tetikasa hanohanana ny sehatry ny fizahantany, mitentina 10 tapitrisa dolara, ny fandaharanasa Pic (Pôle integré de croissance) ao amin’ny Banky iraisam-pirenena. Nanokana 5 tapitrisa dolara izy ireo hanampiana ny mpisehatra amin’ny fizahantany, hanamafisan’izy ireo ny fahaiza-manaony, mialoha ny hiverenan’ny sehatry ny fizahantan amin’ny laoniny. Nampahafantarina, omaly, ny fandaharanasa “Miatrika ny Covid”, hampiofanana ireo mpisehatra fizahantany, eto Antananarivo sy ny manodidina, miampy ny any faritra iasan’ny Pic, any Nosy Be, any Sainte-Marie, any Antsiranana, any Toliara ary any Taolagnaro.
Nilaza ny minisitry ny Fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro, Randriamandranto Joel, fa tanterahina mandritra ity taona 2021 ity ny fandaharanasa “Miatrika ny Covid”. Miisa 10 000 ny mpiasa sy ny mpisehatra fizahantany homena fiofanana ao anatin’ny fotoam-piofanana miisa 500. Hisy koa fampiofanana mikasika ny fandraharahana, ny fianarana teny vahiny sy ny informatika, sy ny hafa.
Hatao eto Antananarivo ny 250 ka manodidina ny olona 5 000 ny ho voakasika. Miisa 15 ny seha-pihariana ho voakasika ka ao anatin’izany ny mpiasa amin’ny fiantranoana, ny fisakafoana, ny mpitarika mpizahatany, ny mpampanofa fiara, ny mpikarakara mpizahatany (agence de voyage sy tour operator), sns.
Nifarimbona niaraka amin’ny fandaharanasa Pic namolavola ity tetikasa ity ny minisitera MTTM, ny Ofisim-paritry ny fizahantany ary ny Fiombonamben’ny federasiona ho an’ny fizahantany (CTM).